ကွန်ဒို in Southeast Uplift
ကွန်ဒို in Portland
ကွန်ဒို in Oregon
ကွန်ဒို in Bella Vita
ကွန်ဒို in Las Vegas
ကွန်ဒို in Nevada
ကွန်ဒို in East Louisville
ကွန်ဒို in Louisville
ကွန်ဒို in Kentucky
ကွန်ဒို in South 101
ကွန်ဒို in Santa Clara
ကွန်ဒို in California
ကွန်ဒို in Lower North
ကွန်ဒို in Philadelphia
ကွန်ဒို in Pennsylvania
1 - 10 ၏ 126814 စာရင်းများ
Modern and spacious! This3bed/1.5 bath corner unit townhouse hasaside yard,afinished daylight basement and large attached garage--even an extra deeded parking space! Sustainable bamboo flooring on main, brand new carpets, and fresh paint. Walk to amazing breweries. Short drive to Mt. Tabor Par...
ရောင်းရန်ရှိသည် |3အိပ်ရာ|2ရေချိုး | 1445 Sq feet
Portland in Oregon (United States), 97202
ထုတ်ဝေသည် Keller Williams Realty Profes.
Two Bedroom, One Bath condo in guard gated community of Bella Vita. Great location in the community. Unit is across the street from Pool, Spa, clubhouse and mailboxes. Condo located on 2nd floor. Granite countertops. New carpets through out. All appliances included. Clean and ready for move in. Conv...
ရောင်းရန်ရှိသည် |2အိပ်ရာ| 1 ရေချိုး | 816 Sq feet
Las Vegas in Nevada (United States), 89103
ထုတ်ဝေသည် O48 Realty
Awesome Condo in the upscale community of Winchester Place. What's not to love about this second floor unit with Elevator, Fireplace, Screened Porch, Laundry in Unit, and this one comes withasought after Carport. Beautiful surroundings to walk or bike and tucked away inaquiet neighborhood. The l...
ရောင်းရန်ရှိသည် |2အိပ်ရာ|2ရေချိုး | 1302 Sq feet
ထုတ်ဝေသည် Carol Luthi Associates
Condo For Sale In Santa Clara, California
Gorgeously Updated 1 Bed / 1 Bath Santa Clara Ground Floor Condo! Located in the Coronado Villas gated community, this condo offers endless features including, laminate floor, BRAND NEW carpet in the bedroom, granite countertops and in-unit washer/dryer in your private laundry room. The 1st Floor co...
ရောင်းရန်ရှိသည် | 1 အိပ်ရာ| 1 ရေချိုး | 716 Sq feet
Santa Clara in California (United States), 95050
ထုတ်ဝေသည် Intempus Realty
Come and view this full rehab with5Bedrooms and 3.5 Baths. Everything is brand new and ready for tenants to move in. This property is only blocks from Temple University and is ideal foranew Investor to create passive income by renting out each bedroom separately. There isacommon Living Room, K...
ရောင်းရန်ရှိသည် |5အိပ်ရာ|4ရေချိုး | 1558 Sq feet | 0.023 Acre
Philadelphia in Pennsylvania (United States), 19132
ထုတ်ဝေသည် Keller Williams Philadelphia
ကွန်ဒိုမီနီယံကွန်ဒိုမီနီယံကွန်ဒိုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကွန်ဒိုများအနေဖြင့်အတိုချုပ်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုသီးခြားစီပိုင်ဆိုင်သောအိမ်ရာအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူနေအိမ်ကွန်ဒိုမီနီယံများသည်မကြာခဏတိုက်ခန်းအဆောက်အအုံများအဖြစ်ဆောက်လုပ်ထားသော်လည်းတစ်သီးတစ်လုံးတည်းရှိသောအိမ်များကဲ့သို့ခြံဝင်း၊ အဆောက်အ ဦး အပြင်အဆောက်အအုံများနှင့်လမ်းများကိုအတူတကွပိုင်ဆိုင်ပိုင်ဆိုင်ထားသည့်“ သီးခြားကွန်ဒိုမီနီယံများ” တိုးပွားလာခဲ့သည် ရပ်ရွာအသင်းအဖွဲ့။ ၎င်းတို့၏အိမ်ငှားများကငှားရမ်းထားသောတိုက်ခန်းများနှင့်မတူဘဲကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန်းများကိုလုံးလုံးလျားလျားပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ထို့အပြင်တစ် ဦး ချင်းစီယူနစ်၏ပိုင်ရှင်တွေလည်းစင်္ကြံ, walkway, အဝတ်လျှော်ခန်းကဲ့သို့စသည်တို့ကို၏ပိုင်ဆိုင်မှု၏ဘုံareasရိယာများစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်။ ; HVAC စနစ်၊ ဓာတ်လှေကားစသည့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့်သာယာအဆင်ပြေမှုများ၊ များစွာသောစျေးဝယ်စင်တာများသည်စက်မှုလုပ်ငန်းကွန်ဒိုမီနီယံများဖြစ်ပြီးလက်လီရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းနှင့်ရုံးခန်းနေရာများသည်၎င်းတို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကပိုင်ဆိုင်ကြပြီးစျေးဝယ်စင်တာ၏ဘုံareasရိယာများသည်သီးခြားနေရာများပိုင်ဆိုင်သောစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကပိုင်ဆိုင်သည်။